UJoe Hill. Amakhosi kusengamakhosi ezokwesaba | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Abalobi, I-Novela, Ukwesaba
UJoe Hill ungomunye walabo babhali abakwazi ukubhala kuphela amanoveli athusayo. Okokuqala, ngoba kufanele ubone ubuso bakhe kuphela ukuze asikhumbuze ngomuntu othile. Futhi okwesibili ngoba, impela, ukuthi othile ungubaba wakhe, uStephen King. Kodwa lo mfana wayefuna ukukufihla lapho eqala, ngenxa yokuqhathanisa okuhlala kukubi Kuze kube yilapho eseziphumelele yena, akasenandaba nokuthi kwaziwe.
UJoseph Hillstrom King uzuze njengefa ukwesaba kufakele igazi elinoshevu futhi uqophe nomsebenzi omuhle wokuba ngumbhali okuhamba phambili yohlobo oluheha njalo. Lokho isithunzi sikayise Kukhulu kakhulu? Yebo, kukhona ukuthanda wonke umuntu. Futhi labo abathanda ukuba nesikhathi esinzima, ukuthi kukhona ohlakaniphileyo ababili abavela emndenini owodwa noma bangakwazi ukuhlangana ngokufanayo, awu, kungcono kuncono. Nakhu kuhamba ukubuyekezwa kwezinye zezincwadi zakhe.
1 UJoe Hill
2 Ezinye izincwadi
2.1 Isudi kamufi
Ngafika eJoe Hill ngelinye ihlobo. Uya eholidini futhi ufuna ukufundwa kokubalekela. Ngase ngivele ngiphikisana nayo Isudi kamufi, 2007, futhi, yize sengikubalile kaningana lokho Angiyena owohlobo olwesabekayo, Ngivame ukufunda okuthile ngezikhathi ezithile. Ngakho-ke ngithathe i- uhlelo lwephakethe olwandle. Futhi ngiyathanda. Futhi Ngibe nesikhathi esibi, kunjalo, futhi wayengazi nokuthi uyindodana ka Stephen King, engingakaze ngifunde lutho kodwa kusobala ukuthi ngibonile ezinye ze ukulungiswa okuyizinkulungwane zezindaba zabo.
IHill ihamba ngendlela efanayo, kokubili kuma-bestsellers naku-versions wezincwadi zakhe zebhayisikobho. Okusabekayo okungaphezu kwamandla emvelo kuhlanganiswe nezindaba ezinhle ezibambayo futhi bafunda kahle, mhlawumbe ngaphandle kokuphonsa amarokhethi ngokwesitayela noma ngekhwalithi yokulandisa, ake sithi. Ubuye wasebenza nohlobo lwe indaba con Izipoki kanye amahlaya, nge Locke & Ukhiye. Kukhona izihloko eziningana, kepha ngizihlaziya lezi ezintathu.
Inoveli yakhe ngu aseqala, ilandisa indaba ka UJude Coyne, inkanyezi ye-rock esethathe umhlalaphansi. Uhlala esigodlweni kuphela nomphathi wakhe nentombi encane kakhulu kunaye. Futhi kunjalo umqoqi wezinto ezihlobene angaphezu kwawemvelo. Lokho kuzilibazisa kuzomholela bhida ngesipoki endalini eku-inthanethi, futhi ezinsukwini ezimbalwa kamuva, uthola ibhokisi eliyinqaba elimise okwenhliziyo eliqukethe isudi yomuntu ofile. Futhi-ke, leso sipoki, ICraddock, ngeke kuthathe isikhathi eside ukuvela. Okokuqala, ngendlela ecashile kakhulu kepha kungekudala kuzoba kakhulu esongela. Lapho umphathi wakhe ezibulala, uCoyne nentombi yakhe banquma ukubaleka ukuze basindise izimpilo zabo. Kepha ngeke kube lula nakancane.
Kwakungokwakhe okwesibili inoveli futhi kuyo umlingiswa oyinhloko u indoda ukuthi ngolunye usuku uvuka elambile kakhulu ngemuva kobusuku bokuzijabulisa. Ngokuthuka, uthola lokho esiphongweni sekuphumile izimpondo zobusathane nokuthi, ngaphezu kwalokho, a amandla okungaphezu kwemvelo kukuvumela funda imicabango okungakhulumeki kakhulu kwabanye.
UHill uphakamisa a isigaba cishe i-apocalyptic lapho a isifo yemvelaphi engaziwa isakaze yonke indawo. Odokotela bakubiza nge- "Trichophyton draco incendia," futhi emhlabeni wonke yiwo Isikali sikaDrako, eyodwa spore ophawula isikhumba salowo onegciwane ngamabala amnyama negolide ngaphambi kokuzenza kwaqhuma amalangabi. Futhi alikho ikhambi noma ikhambi.
I-protagonist ngu Harper Grayson futhi ungumhlengikazi. Ushadile, usebenza esibhedlela futhi welapha abantu abagulayo ababona beshisa cishe njalo. Lapho esethelelekile, uyakhulelwa futhi umyeni wakhe uthathe isinqumo esinzima, uHarper unquma ukuthi ufuna ukuhlala abaleke. Kepha futhi uyazi UJohn Rookwood, okucatshangwa ukuthi ungumcimi-mlilo ukuthi, yize uthelelekile futhi, ayishi futhi ifunde ukukhanyisa nokusebenzisa umlilo njengesivikelo sezisulu nesikhali kulabo abafuna ukuqothula abangenwe yilesi sifo. Laba bobabili bazofanelana nohlobo oluthile lwekamu elifihliwe lapho abagulayo bebalekela khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UJoe Hill. Amakhosi kusengamakhosi ezokwesaba
Isaga sabaphila isikhathi eside ngu-Eva García Sáenz